Ukususa ngokufanelekileyo uninzi lweebhaktheriya, ii-microorganism kunye nezinye izinto ezingafunekiyo emanzini.
Iimpawu ze-0.01μm ye-ultrafiltration membrane ukuqinisekisa 99.99% yokunciphisa inqanaba.
Ngesicoci samanzi se-membrane se-UF sinokugcina iityuwa eziluncedo emanzini ukugcina ukomelela kwakho.
Ukuhamba okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-2.5L / min (malunga ne-0.66gpm), ukonwabele amanzi rhoqo kwisicelo esahlukileyo.
Unyango lwaManzi lwe-Ultraviolet lunceda ukwandisa uluhlu lwendlela olisebenza ngayo.
I-5269 2-Inqanaba eliphantsi kweSink Icompact Reverse Osmosis System
Isixhobo esilungileyo nesigcina indawo esifanelekileyo nakweyiphi na indawo ephantsi kwesinki.
Inkqubo inokubonelela ngokuhamba ngokukhawuleza kwamanzi (ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-600 ngosuku), kucoca ikomityi (200ml) yamanzi kwimizuzwana esi-8.
Ukusebenza kokuhluza okuhle ngezinto ezimbini zokucoca ulwelo, ezilula kwi-DIY kunye nokugcina phantsi kwesithuba sokuntywila.
Amanzi aneendawo ezimbini zokuhambisa ezinokutshintshwa ngokulula phakathi kwamanzi acocekileyo okusetyenziswa kwemihla ngemihla kunye namanzi acocekileyo okusela.
Ukugungxulwa okuzenzekelayo okupheleleyo kubonelelwa rhoqo rhoqo ukuhlamba ukungcola okuqokelelweyo kunye nokugcina inwebu icocekile.
I-5687/5688 3-Inqanaba eliphantsi kweSink Household Reverse Osmosis System
Ucoceko lwamanzi lwezoqoqosho olususa ukungcola okuninzi kubandakanya i-TDS, isinyithi esinzima, ibhaktheriya emanzini akho empompo.
I-ASO piston enelungelo elilodwa lomenzi inokuhlangabezana nokuhamba okuncinci kwamanzi kumandla ombane.
Imodeli ye-75GPD iza netanki lamanzi le-3GPD.
Hluza iCartridge, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Indlu yonke yokuCoca uManzi,